VaTsvangirai Vanoti Hurumende Yavo Ichabvisa Huori Huri Munyika
Chikunguru 24, 2013
HWEDZA — Mutungamiri weMDC-T, VaMorgan Tsvangirai, vashora mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vachiti vari kuchengetedza vanhu vari kuita huwori muhurumende. Va Tsvangirai vataura izvi pamusangano wavaita nevatsigiri vavo ku Hwedza.
Vachitaura pamisangano wavaita nevatsigiri vavo panzvimbo yemabhizimusi yeZaire, VaTsvangirai vapomera VaMugabe mhosva yekusatora matanho pavamwe vakuru vakuru vari muhurumende vavati vari kuita zvehuwori.
Vatsoropodzawo VaMugabe vachiti naivowo vari kuita zvehuwori pamwe chete negurukota rezvedzimba, VaIgnatius Chombo, pamwe negurukota rinowona nezvevechidiki, Va Saviour Kasukuwere,.
VaTsvangirai vakurudzira veruzhinji kuti vavhotere vanhu vanokoshesa hutongi hwegutsa ruzhinji musarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru.
Vatiwo vakakunda musarudzo, hurumende yavo ichashanda zvakasimba kuti ivandudze hupfumi hwenyika kuburikidza nekuwanisa veruzhinji mabasa pamwe nekudyidzana nedzimwe nyika.
VaTsvangirai vaitawo mimwe misangano nevatsgiri vavo ku Msasa kuChikomba pamwe nekuMahusekwa.
Ukuwo mudzimai wemutungamiri weZanu PF, Amai Grace Mugabe, vakurudzira vatsigiri vebato ravo kwaZvimba kuti vavhotere VaMugabe kuitira kuti MDC-T isawane zvigaro mudunhu iri.
Vachitaura vari paKutama Day Primary School, Amai Mugabe vati vanhu vekwaZvimba vakakomborerwa zvikuru kuti vanobva munzvimbo imwe chete nemutungamiri wenyika.
Zvichakadai, VaMugabe, avo vanga vane musangano nevatsigiri vavo kuNorton, vanoti Zimbabwe inogona kuzvisimudzira yoga pasina dzimwe nyika kana chirongwa chekuendesa hupfumi kuvatema chikasimbaradzwa.